0.2BBL-2BBL Fermentation Tank (mamwe maratidziro anogona kuve akagadzirwa), China 0.2BBL-2BBL Fermentation Tank (zvimwe zvinotsanangurwa zvinogona kugadzirwa) Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - NingBo COFF Machinery Co., ltd
Smwana akatasva, akanaka kutarisa, plug uye kutamba, sarudzo yakanakisa yekubika imba uye kudzidza kwendege.Low mutengo
Mazhinji emakambani ekudhirowa anotanga bhizinesi ravo kubva kudiki diki echinyorwa. Ndosaka COFF timu yakazvipira pachavo kupa vatengi neyakajairwa mhinduro kubva dhizaini, kugadzira kune mushure mekutengesa sevhisi. Nemidziyo yeCOFF, unogona kutarisira kukura mukukosha.
Nei uchiganhurira kugona kwako kwekubika doro nemidziyo isina mbichana uye isingashande? Zvishandiso zveprimiyamu zvinodhura zvakanyanya here? COFF inogona kuunza doro rako kuhupenyu nekukwirira mashandiro, anodhura-anodakisa mabhegi ayo akagadzirwa zvizere kubva kune yakasarudzwa SS304, uchishandisa akanakisa ezvehutsanana zvinhu uye mune yakanakisa yepamusoro yekupedzisa kugadzirisa mashandiro ako.
● Chimiro: 1590x590x1200mm (H)
Brite Tank Chinangwa